एसिड छ्यापिएकाहरू अस्पतालबाटै गुहार्छन्- 'उज्ज्वल अंकल आइदिनुपर्‍यो'
कोभिड–१९ को विश्वव्याधि, फैलिँदो संक्रमण र मृत्युका खबरले बितेका सात महिना नेपाली जनजीवन नराम्ररी खल्बलियो । आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धहरू तहसनहस भए । खबर नै नबनेका घरघरका संकट त कतिकति ! यो स्थिति कहिलेसम्म लम्बिने हो, अनुमान गर्न कठिन छ । आमनागरिकलाई महामारीबाट जोगाउन र अहिलेका संकट पार लगाउन सरकार करिब–करिब असफलजस्तै देखियो ।
साढे छ वर्ष बितिसकेछ, ट्युसन पढ्न निस्किएका दुई छात्रा सीमा बस्नेत र संगीता मगरलाई राजधानीको सम्पदा केन्द्र वसन्तपुरमा तेजाब (एसिड) छ्यापिदिएको । त्यति नै समय गुज्रिएछ, उज्ज्वलविक्रम थापा तेजाबविरोधी अभियानमा होमिएको पनि ।
सिन्धुलीबाट शल्यक्रियाका लागि ल्याइएका वृद्धालाई भेट्न वीर अस्पताल पुग्दा उज्ज्वलले इमर्जेन्सी वार्डमा सीमा र संगीतालाई जुन हालतमा देखे, त्यही दिनदेखि उनी तेजाब आक्रमणविरुद्ध बोल्न थाले । नतिजा सकारात्मक निस्कियो, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सहयोगमा दुवैलाई अस्पतालको बेडबाटै एसएलसी परीक्षा दिने र निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त भयो । दुवैले नोबेल एकेडेमीमा उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति पाए ।
त्यसपछि त एसिड प्रहारका घटना घट्यो कि उज्ज्वलको मोबाइल बजिहाल्थ्यो । उज्ज्वल जुरुक्क उठेर दौडिहाल्थे । ‘एसिड छ्यापियो भनेपछि त्यहाँ सबैभन्दा पहिले पुग्ने यो पीडाबाट गुज्रिएकाहरू नै हुन्छन्,’ उज्ज्वल भन्छन्, ‘उज्ज्वल अंकल आइदिनुपर्‍यो भनेर अस्पतालबाटै बोलाउँछन् ।’ पारिवारिक साइनोजस्तो बनेपछि नपुगी धरै छैन ।
यसैगरी, २०७१ पछिका एसिड आक्रमणका एक/एक घटनासँग उनी जोडिन पुगे । आक्रमणमा परेका १९ मध्ये १३ जनालाई प्रत्यक्ष सहयोग गरे । दुई वर्षअघिको एउटा घटनाले चाहिँ उनलाई यस्ता आक्रमणलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने अठोटमा कस्यो । भदौ २०७५ मा रौतहटकी सम्झना र सुस्मिता दास दिदीबहिनीमाथि मध्यराति सुतिरहेकै ठाउँमा तेजाब छ्यापियो । जलनमा परेकाहरूको उपचार गर्ने कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारार्थ ल्याइएका दिदीबहिनीलाई भेट्न उज्ज्वल पुगे ।
सम्झनाको हालत बिर्सनलायक थियो । काठको मुढो डढेजस्तो तपतपी मासु पग्लेर चुहिरहेको । दुवै स्तन बगेर पेटमा झरेको । ‘एसिड आक्रमणमा परेकाको सबै पीडा देखिसकेँ भन्ठान्थेँ । तर सम्झनाको केसले मलाई जीवनभर सम्झिरहने पीडा दियो,’ उज्ज्वलका आँखा रसाए, ‘कहिल्यै हरेस नखाने मेरो यो घटनाले सातो लियो । यो पीडा सहनुभन्दा ती केटी मरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । ’
१२ दिनपछि सम्झनाको मृत्यु भयो ।
उनकी अर्की बहिनी त्यही अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी थिइन् । अस्पतालले पैसा तिरेर मात्र लास लैजानू भन्यो । उज्ज्वलको शान्त स्वभावमा ज्वारभाटा चलेछ । बहिनी त्यहीँ उपचार गराइरहेकी छ । अस्पतालले पैसा माग्ने भनेर मलाई खपिनसक्नु रिस उठ्यो र अस्पतालको सिसावाला भित्तामा उनले लात्ती बजारे ।
सम्झनाको मृत्युपछि उनकी बहिनी सुस्मिता र बाले उज्ज्वलको हात च्याप्प समातेछन् । उज्ज्वलले छटपटाएर मरेकी सम्झना सम्झिए । सुस्मिता र उनका बाले बिरानो काठमाडाैं सहरमा आडभरोसा खोजेका थिए । अनि उनले आफैँसँग शपथ खाए, ‘अब यो मुद्दालाई ठेगान नलगाई छोड्दिनँ ।’
सानो सहयोग गर्नेहरू ठूलो प्रचारमा लागिरहेको यो मतलबी दुनियाँमा एसिड आक्रमणबाट बाँचेकाहरूलाई उज्ज्वलले चुपचाप सहयोग गरेको पाँच वर्ष बितिसकेको थियो ।
खै कहाँबाट हो, साढे एक वर्षअघि उनको मनमा यस्तो कुरा चलेछ- सरकारको पनि मन छ । तर एसिड प्रहारबाट बाँचेकाहरूको अनुहार त्यो मनलाई देखाउने कसरी ?
त्यसबेला वीरगञ्जकी १४ वर्षीया बालिका मुस्कान खातुनलाई स्कुल जाँदा एसिड छ्यापिएको थियो । उज्ज्वल मुस्कानलाई सहयोग गर्न खटिएकै थिए । जुक्ति निस्कियो, मुस्कानकै हातले कोरेका चिट्ठी प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने । अन्य घटनाभन्दा यसले ज्यादा चर्चा पायो ।
यतिले मात्र सरकारको मन पग्लिँदैन भन्ने उज्ज्वललाई पूर्वाभास थियो । त्यसैले एउटै स्कुलमा पढेको नाता जोड्दै बलिउड स्टार अभिताभ बच्चनलाई भिडियो सन्देश पठाइदिन आग्रह गरे । भारतको नैनीतालस्थित सेरउड कलेजमा पढेका उज्ज्वलका सिनियर हुन्, अमिताभ । ‘सेरउडको भूपू विद्यार्थीको एउटा भेलामा भेट हुँदा चिनजान भएको थियो,’ उज्ज्वल भन्छन्, ‘अमिताभले भिडियो सन्देश पठाए ।’
तर मुस्कानको अनुहारमा खुसी छाएन । अमिताभ पुरानो पुस्ताका स्टार । मुस्कान नयाँ पुस्ताकी । मुस्कानकै सिफारिसमा उज्ज्वलले कलाकार वरुण धवन र कृतिका सेननका भिडियो सन्देश भारतबाट मगाए । मुस्कानकै रोजाइमा गायक राजु लामा, अभिनेता राजेश हमाल, क्रिकेटर पारस खड्कालाई अस्पतालमै बोलाइदिए । यसरी उज्ज्वल चुपचाप सहयोग गरेको केही वर्षपछि सेलिब्रेटी बने ।
‘एक पटक छोरीसँग दरबारमार्गमा हिँडिरहँदा मसँग फोटो खिचाउने भन्दै मानिसहरूले घेरे,’ उनी अचम्म मान्छन्, ‘अनि पो सेलिब्रेटी बनेको फिल भयो । भीड देखेर छोरी पनि रिसाइन् ।’ यो मुद्दालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भएकाले उनी केही समय सेलिब्रेटी बन्न पनि राजी भइदिए ।
२०७१ मै भएको एउटा चुकबाट कानुनी लडाइँ फुत्किएको थियो । सीमा र संगीतालाई भेट्न वीर अस्पतालमा पुगेका गृहमन्त्री गौतमले दुवैको निःशुल्क उपचार सरकारले गराउने वाचा गरे । ‘तर लिखितम नभएकाले त्यसपछिका पीडितले त्यस्ताे सुविधा पाएनन्,’ उज्ज्वल थकथकी मान्छन् ।
संगीता मगरले एसिड आक्रमणको अपराधलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ मा राख्नुपर्ने, मुद्दा दर्ता हुनासाथै अग्रिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, सबै अस्पतालमा बर्न युनिट, निःशुल्क औषधोपचार, आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रमकाे व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै रिट दिइन् । सर्वोच्चले २०७४ जेठमा रिट निवेदकको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दियो । तर त्यसको पालना भएकै थिएन ।
अचानक महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले तेजाब आक्रमणको विषयमा चासो देखाए । खरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटघाटको समय मिलाए । सरकारको मन रहेछ भन्ने उनको विश्वास अब चलमलायो ।
१८ भदौ ०७७ । उज्ज्वलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उनको कुरा डेढ घण्टा सुने । २५ भदौमा तेजाब प्रहारबाट बाँचेकाहरूसँग भेट्ने इच्छा प्रधानमन्त्रीले देखाए । १३ जना ‘एसिड सर्भाइभर’लाई लिएर उज्ज्वल प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगे । भेटमा प्रधानमन्त्रीले 'कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदा उज्ज्वलको राय लिएर बनाउनू' भनिदिए ।
फलतः १२ असोजमा एसिड छ्याप्नेलाई २० वर्ष कैद, १० लाख रुपैयाँ जरिवाना, कसुर गरेको एक वर्षसम्म मृत्यु भएमा कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा चल्नेलगायतका कडा दण्डसहितको कानुन आएको छ । उपचार, रोजगारी, क्षतिपूर्ति, जीवन निर्वाह कर्जाको ग्यारेन्टी भएको छ । एसिड बिक्री वितरण नियमनको कानुन बनेको छ ।
तेजाब छ्यापिनेका नाममा कसैले सहयोग उठाउन नहुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्तो व्यवस्था गर्नुको पछाडि गज्जबको प्रसंग रहेछ । तेजाबपीडितको नाममा एउटा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)ले फेसबुकमार्फत रकम उठाएछ । झण्डै १० लाख उठेछ । तर पीडितलाई भने ५० हजार दिएर फोटो खिचेर टारेछ । बैंकमा पहुँच पुर्‍याएर उज्ज्वलले यो भेद पत्तो लगाए ।
अभियानकै क्रममा उनले तीनवटा एनजीओसँग सहयोग मागेछन्, तर सहयोग गरेको फोटो नखिच्ने सर्तमा । सर्त सुनेपछि सबै पन्छिए । ‘अनि एसिड सर्भाइभरको दुःख देखाएर पैसा कमाउने एनजीओको धन्दा बन्द होस् भनेर कानुनमै व्यवस्था गर्‍यौँ,’ उनी भन्छन् । फौजदारी अपराध संहितामा कसुर पीडितको नाममा चन्दा, सहयोग माग्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
‘यसपछि एनजीओवालाहरू मसँग फायर छन्,’ विजेता भावमा उज्ज्वल भन्छन्, ‘हामीलाई कुनै दाता चाहिँदैन । खाली विश्वास जित्न सक्नुपर्‍यो । दानी नेपालीको कमी छैन ।’ एनजीओमा वामहरूकै वर्चस्व छ । सरकार वामकै छ । तर राप्रपाबाट राजनीति गर्ने उज्ज्वलले एनजीओका लगाम कस्ने कानुन बनाउन भूमिका खेले । ‘योचाहिँ अचम्मै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘जेन्युन कुरा इमानदारसाथ उठाउँदा यो सम्भव भयो ।’
तेजाब आक्रमण गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नेपाललाई उदाहरण मान्छन्, उनी । नेपालमा कानुन आएको दिनलाई तेजाबविरुद्धको विश्व दिवस मानेर सार्क हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) मा प्रस्ताव गर्ने अभियानमा छन्, अहिले । ‘अहिलेसम्म नेपालले यूएनमा त्यस्तो कुनै प्रस्ताव लगेको छैन । यो पहिलो हुनेछ,’ उनी आशावादी किन पनि छन् भने एसिड आक्रमणबाट बाँचेकी भारतीय नागरिक लक्ष्मी अग्रवाल, जसको नाममा छपाक फिल्म बनेको छ, ले नेपाली कानुनको अंग्रेजी संस्करण मागेकी छिन् ।
तेजाबमा सार्वजनिक भएको मात्र हो, उज्ज्वलको सामाजिक सेवा । खासमा उनी जन्मिएकै समाजसेवाका लागि भन्दा फरक पर्दैन । पत्रिकामा दुःख पाएकाको समाचार, फोटो छापिएपछि उनी मन थाम्न सक्दैनन् र पछ्याउँदै सहयोग गर्न पुगिहाल्छन्, मधेसका देहातदेखि पहाडी झुपडीसम्मै । एकपटक कान्तिपुरमा वृद्धाले बूढाको आँशु पुछ्दै गरेको फोटो देखेछन् । मन बिझायो । फोटो खिच्नेसँग पनि सम्पर्क सूत्र रहेनछ । फोटो पत्रकारले भनिदिए, ‘मैले त टिचिङ अस्पतालअगाडि फोटो खिचे अनि हिँडे ।’ पत्रिकाको फोटो देखाउँदै टिचिङ अस्पतालअगाडि धुइँपत्ताल खोजे । बल्ल एक प्रहरीले एउटा स:मिलमा बसेको सुनाइदिए ।
भेट्दा दुवै जना अपांग रहेछन् । सप्तरीका यी वृद्ध जोडी खाडी मुलुकबाट फर्किने छोरा लिन र पशुपतिको दर्शन गर्न आएका रहेछन् । एयरपोर्टअगाडिको ठूलो गेटमा कुर्न भनेर छोराले भनेको रहेछ । कुरिरहे । तर यूएस–बंगला विमान दुर्घटनामा परेर छोराको लास टिचिङ पुगिसकेको थियो । प्रहरीले पुर्‍याएछ, छोराको लास बुझ्न । डेढ लाख ऋण रहेछ । दुई छोरामध्ये एउटा पहिल्यै बितेको र अर्को अहिले । नाति दुई महिनाको रहेछ । ‘छोरो बितिगयो । त्यो केही गरी फर्किंदैन,’ वृद्धाले उज्ज्वललाई व्यथा सुनाए, ‘अब ऋण नतिरे भएको १० कठ्ठा जग्गा साहुले खान्छ । हामी भोकै मर्छौं ।’
उज्ज्वलले छोराको दाहसंस्कारको खर्च बेहोरे । सप्तरी पुग्ने खर्च दिएर पठाए । अनि तुरुन्तै फेसबुकमार्फत करिब २ लाख उठाए र भोलिपल्ट साहुको सावाँ तिरिदिन सप्तरी पुगे ।
यस्ता सहयोगका सूची बनाउने हो भने लामै विवरण निस्कन्छ । कतिलाई सहयोग गरे ? बहिखातामा गन्ती छैन । डायरीमा टिप्दैनन् । सहयाेग गरेकाे संख्या होलसेलमा हिसाब गर्दा १० हजार नाघेको लख काट्छन् ।
सहयोग जुटाउने उनको रैथानी शैली छ । एकपटक सहयोग जुटाउन रौतहटमा राजमार्ग बन्द गराएछन् । मुख्यमन्त्रीले त्यहीँ आएर सहयोगकाे घोषणा गरे । सानोदेखि ठूलो जत्रोसुकै रकम लिन्छन् । ‘२० रुपैयाँसम्म दिने पनि भेटेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘रकम सानोठूलो हुँदैन । विश्वास कमाइएछ जस्तो लाग्छ ।’ उनीसँग सहयोग जुटाउने कुनै संगठित टिम छैन । तर परेको बेला कमिला बनेर धुइरिनेको ताँती लागिहाल्छ ।
कसैले जन्मदिनको निम्तो दिएमा पहिले उसले आफू जति वर्ष पुगेको हो त्यति हजार रुपैयाँ कान्ति बाल अस्पतालको कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । अनि मात्र निम्तो स्वीकार्छन् । त्यो पैसा विपन्नको उपचारमा खर्च हुन्छ । यस्ता अनेक शैली छन्, उनका । ‘म कसैको आस मार्न सक्दिनँ,’ उनी भन्छन् ।
देशभरबाट उनलाई धन्यवाद भन्नेहरू कुनै दिन टुट्दैनन् । एसिड सर्भाइभरकै कुरा जोडौं । उनले सहयोग गरेकामध्ये छ जनाले दैनिक ८ बजे गुडमर्निङ र राति ९ बजे गुडनाइट भन्न बिराउँदैनन् ।
एसिड आक्रमणको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याएपछि बलात्कारको मुद्दामा पनि उनलाई आइदिन धेरैतिरबाट आग्रह गरिएकाे छ । तर यसमा मुद्दाभन्दा व्यक्ति प्रधान बनाएको उनको मूल्यांकन छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा आवाज उठाउनेले मुद्दाभन्दा निर्मलालाई जोड दिएको उनको ठहर छ । ‘त्यसैले यो मुद्दा बलियो बनेन,’ उनी भन्छन्, ‘नाबालिका बलात्कार भनेको भए देशभरको आवाजले धर्ती जुरुक्क बोक्थ्यो । निर्मला पन्तभन्दा त्यो कञ्चनपुर वा सुदूरपश्चिमको मात्र विषय बन्यो । बलात्कार त देशभर भइरहेको छ नि ।’
महिलाको विषयमा पुरुषलाई सहभागी नगराई गरिने अभियानले समेत ती विषय कमजोर बनेको उनको अनुभव छ । एकपटक साथी संस्थाले उज्ज्वललाई वक्ताको रूपमा बोलाएछ । उनले सर्त राखे, हलमा आधा पुरुष हुने भए मात्र । ‘जो पीडक हो, उसलाई नबुझाईकन कसरी समाधान निस्कन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘महिलावादीहरू लिंग (जेन्डर)मा समस्या देख्छन् म मानसिकतामा । बलात्कारको विषयमा पुरुषलाई राखेर उनीहरूभित्रको आपराधिक मनोवृत्तिको सफाइ गर्नुपर्छ, अनि मात्र सफलता पाइन्छ ।’
उज्ज्वल लागे भने असम्भव केही छैन । साक्षी छ, तेजाबविरुद्धको तेजिलो अभियानको शानदार सफलता ।
आशाका आधारशिला- १ : नेपालकाे 'वुहान' कहलिएकाे भुल्केले यसरी जित्याे काेराेना
आशाका आधारशिला- २ : काेभिड संक्रमित मेयर, जसले वीरगञ्जलाई ठूलो क्षति हुनबाट जोगाए
आशाका आधारशिला-३ : लकडाउनमा महावीर पुनका १३ आविष्कार
आशाका आधारशिला- ४ : लिली थापा : जसले लकडाउनमा ६० हजार गरिबकाे हातमुख जाेडिदिइन्
आशाका आधारशिला-५ : खुलामञ्चलाई विपन्नकाे भान्साघर बनाउने सारथि
आशाका आधारशिला-६ : आर्यघाटकी सपना जसले कोरोनाकालमा पनि सड्नबाट बचाइन् शवहरूलाई
आशाका आधारशिला-७ : तेजिलाे तिलोत्तमा : कोरोना लडाइँको मोडल अभ्यास
आशाका आधारशिला-८ : एसिड छ्यापिएकाहरू अस्पतालबाटै गुहार्छन्- 'उज्ज्वल अंकल आइदिनुपर्‍यो'
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक ५, २०७७, ०८:३०:००